ထိုင်းနိုင်ငံက အဓိကခရီးသွားနေရာများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေး နိုဝင်ဘာလအထိ နှောင့်နှေးဖွယ်ရှိ - Xinhua News Agency
ဘန်ကောက် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံက မြို့တော်ဘန်ကောက် နှင့် အခြား အဓိက ခရီးသွားနေရာများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး ရည်မှန်းထားသည့််ပမာဏထက်များစွာ နောက်ကျ ကျန်ရစ်နေသဖြင့် ယင်းနေရာများအား နိုင်ငံခြားခရီးသွားများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုကို နိုဝင်ဘာလအထိ ရွှေ့ဆိုင်းရန် စီစဉ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။အောက်တိုဘာလတွင် ဘန်ကောက် ၊ ဟွာဟင်း ၊ ပတ္တယား နှင့် ချင်းဟိုင်တို့အပါအဝင် အဓိကခရီးသွားနေရာများအား ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသည့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ Quarantine ဝင်ရောက်ရန် မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းအား နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်ထိ သက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း နှင့် အားကစားဝန်ကြီး Pipat Ratchakitprakan က ပြည်တွင်းမီဒီယာနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖြစ်သည့် COVID-19 အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲရေးစင်တာ (CCSA)သို့ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် အတည်ပြုရေးအတွက် ပြင်ဆင်ချက်အား တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် လတ်တလော COVID-19 အခြေအနေ နှင့် အလုံးစုံအဆင်သင့်ရှိမှုအား ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်သောကြောင့် အဆိုပါအဓိကမြို့များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်အချိန်ဇယားကို ထပ်မံ ရွှေ့ဆိုင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီး Pipat က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ပြန်ပြီး မဖွင့်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ လိုက်နာရမယ့် အရေးကြီးဆုံး စံနှုန်းတွေထဲက တစ်ခုက အဲဒီမှာရှိတဲ့ လူဦးရေရဲ့ အနည်းဆုံး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားပြီး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ရည်မှန်းချက်ကို မပြည့်ဝသေးပါဘူး။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘန်ကောက်မြို့ တော် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Aswin Kwanmuang ၏ ပြောကြားချက်အရ ယခုထိ မြို့တော်တွင်း နေထိုင်သူများ၏ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဘန်ကောက်မြို့သည် ယခုအခါ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ဆေး လွှမ်းခြုံမှု ရရှိစေရေး အတွက် ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ချိမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နေကြောင်း ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေး အစီအစဉ်သည် ကပ်ရောဂါမတိုင်မီ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၏ အဓိကမောင်းနှင်အား ဖြစ်သော ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး လူနေမှုဘဝ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အာမခံချက်အကြား မျှတအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ယခုနှစ်ကုန်တွင် လူဦးရေ သန်း ၇၀ နီးပါး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရန် ရည်မှန်းထားသည်။စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်အထိ လူဦးရေသန်း ၇၀ နီးပါး၏ ၂၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း CCSA ထံမှ သိရသည်။ (Xinhua)
BANGKOK, Sept. 23 (Xinhua) — Thailand plans to postpone its reopening of the capital Bangkok and other major tourist destinations to foreign visitors until November, citing that the vaccination rate in these regions are still behind the targets.
The planned reopening to fully-vaccinated foreign visitors without quarantine of major tourist destinations including Bangkok, Hua Hin, Pattaya and Chiang Mai in October could be extended to Nov. 1, the Tourism and Sports Minister Pipat Ratchakitprakan said in an interview with local media.
He added that the ministry would submit the adjustment to the Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA), the country’s COVID-19 task force, for approval on Sept. 27.
According to Bangkok Governor Aswin Kwanmuang, about 44 percent of the city’s residents have been fully vaccinated so far, and Bangkok is now accelerating the pace of vaccine roll-out to achieve the 70-percent vaccination coverage.
The reopening plan was part of Thailand’s efforts to boost tourism,akey engine of economic growth before the pandemic, and strikeabalance between ensuring lives and livelihood.
The Southeast Asian nation aims to inoculate about 70 percent of its nearly 70 million population by the end of the year. As of Wednesday, 22.6 percent of its people have been fully vaccinated, according to the CCSA. Enditem
Photo – Photo taken on Sept. 1, 2021 showsashopping mall in Bangkok, Thailand. The Thai government started easing on its lockdown and curfew measures from Wednesday. Restaurants and retail operators are allowed to resume operations with strict social distancing and COVID-19 protocols in place. (Xinhua/Wang Teng)